Ny tranga COVID avo indrindra dia nisy sy ny fiakarana tany Hawaii raha toa ka mirongatra ny fizahantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny tranga COVID avo indrindra dia nisy sy ny fiakarana tany Hawaii raha toa ka mirongatra ny fizahantany
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Governoran'i Hawaii David Ige sy lietnà-governora Josh Green
Miroborobo ny fizahan-tany any Hawaii. Rehefa mandeha amin'ny làlambe Kalakaua Avenue any Waikiki ianao na miantsena ao amin'ny Ala Moana Center na snorkeling ao amin'ny Waikiki Beach dia tsy ho fantatrao fa Hawaii no manana ny vonjy taitra mahatsiravina indrindra voarakitra.
Maro no niantso azy io nanaitra. Hawaii dia nanoratra tranga 622 COVID-19 vaovao androany ary maty 3.
Vao 3 herinandro lasa izay, ny isan'ireo areti-mifindra isan'andro dia 40 ka hatramin'ny 60 ka hatramin'ny 100 ary ankehitriny dia nihoatra ny 600. Ny isa ambony indrindra voarakitra ao amin'ny State of Hawaii dia 307 tamin'ny 11 Aogositra 2020.
Tonga hatramin'ny 30,000 ny mpitsidika avy any Etazonia tonga ao Aloha Ny fanjakana isan'andro, mamela sidina maro manidina amin'ny fahafaha-manao amin'ny tambajotram-pitaterana zotra an'habakabaka vaovao.
The Hawaii fizahan-tany fizahan-tany ary ny governoran'i Hawaii Ige dia tsy miresaka momba ny indostrian'ny fizahantany rehefa manamafy ny fiakarana avo indrindra amin'ny tranga COVID hatrizay.
Nilaza kosa ny Governora eTurboNews:
Ny famerana ny dia dia ho an'ny mpandeha rehetra fa tsy ho an'ny mpitsidika fotsiny, ary tsy mihevitra ny fanovana ny programa Safe Travels izy amin'izao fotoana izao.
Mirongatra ny viriosy sy ny fizahan-tany any Hawaii.
Androany dia, tsy isalasalana, ny fitomboan'ny isan'ny aretina avo indrindra, ary mampatahotra izany.
Manana trano fandraisam-bahiny sy seranam-piaramanidina; zara raha misy toerana ho an'ny lamba famaohana amin'ny fasika any amoron-dranomasina maro.
Miaraka amin'ny isa mihamaro 100 isan'andro, ny fanjakana dia niditra tao amin'ny hidin-trano tanteraka herintaona lasa izay, saingy ankehitriny miaraka amin'ny tranga vaovao 600+, ny Governoran'i Hawaii dia mbola antenaina ihany fa hanaisotra ny fetra sisa tavela raha vantany vao tonga amin'ny 70% ny isan'ny vaksiny.
Nilaza ny governora Ige tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany fa ny isa 70% + dia antenaina hahatratra amin'ny volana septambra.
Hawaii dia nanova ny mason-tsainy amin'ny famaliana ny COVID-19 sy ny karazany hafa amin'ny alàlan'ny fanapaha-kevitra momba ny fameperana mifototra amin'ny tarehimarika, mba hiorina amin'ny isan'ny olona vita vaksiny ao amin'ny fanjakana. Mazava ho azy, ireo mpitsidika 30,000 tonga tao amin'ny Aloha Tsy misy fiatraikany amin'ity fandrefesana na isa ity ny fanjakana.
Raha ny filazan'ny Governora dia olona vaksiny 6 amin'ny 10,000 no voan'ny virus raha ampitahaina amin'ny 300 amin'ny 10,000 tsy vita vaksiny.
Nanoro hevitra ny governora ny hanaovana vaksiny ny olona rehetra, hanalavitra ny halaviran'ny 6 metatra amin'ny olon-kafa ary hanao sarontava ao anaty trano.
Tsy nilaza ny heviny ny Governora eTurboNews fanontaniana momba ny mety hamerenana ny fameperana hafa amin'ny toerany, izay misy fetra ho an'ny trano fisakafoanana, fahatongavan'ireo mpitsidika, ary ny curfews.
Mazava ny fandresen'ny toekarena amin'ny olana ara-pahasalamana COVID, ary i Hawaii izao no mitondra ny firenena amin'ity hafatra ity, raha mbola mihidy ny sisintany iraisampirenena.
1 Aogositra 2021 amin'ny 14:15
Ooooh… mampatahotra! Tsy maintsy miaina ao anaty tahotra isika! Ny tranga dia TSY hopitaly, ary maty ny olona 3 amin'ny mponina mihoatra ny 1.4 tapitrisa fa tsy loza. Maty ve ireo olona 3 ireo tamin'ny 'covid na maty' niaraka tamin'ny 'covid. Mirongatra ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fidorohana zava-mahadomelina any amin'ireo nosy… inona ny toe-piainana nisy talohan'izay? Ajanony ny tahotra mongering !!